Ampahany fanandramana ara-tsosialy, fizarana fitsaboana ara-teknika | Martech Zone
Ampahany fanandramana ara-tsosialy, fizarana fitsaboana ara-teknika
Alahady 13 Janoary 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity herinandro ity dia tena fanamby tamin'ny asa. Azoko antoka fa niasa 100 ora mahery aho - ary tsy nanakaiky ny fametrahana nify tao anatin'ny lisitry ny zavatra hovitaina.
Noho ny fahasalamana dia matetika aho no manandrana mamoaka zavatra tsy maintsy vitaina ary manao zavatra hafa tanteraka. Io dia ampahany amin'ny toetrako - ny namako Pat miantso azy hoe ahy vadikely.
Herinandro na lasa izay dia nihaona tamin'ny namako iray aho mba hiresaka momba ny fananganana tranokala vaovao fa hampiasa Twitter's API tena hanao splash. Ny tompovaviko vaovao dia Raha mitsoka.
Mila mianatra ny API Twitter ihany anefa aho aloha. Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia nanao izany aho. Raha mitsoka dia fangatahana fikarohana kely quirky izay hikaroka izay rehetra minono mampiasa Google. Ny ampahany milay kosa dia mitazona ny antontan'isa momba izay lazain'ny olona fa mitsoka!
Ny mpitsidika, amin'ny ankapobeny, dia mitondra tena tsara. Nanomboka lisitry ny sivana ho an'ny teny sy andian-teny aho, ary koa lisitra sivana ho an'ireo adiresy IP ireo izay tsy hijanona ho tsy mahalala fomba. Ankasitrahako ihany koa ny vazivazy ananan'ireo mpitsidika - eo anelanelan'ny iPhone sy iPod Touch aho. (Nihatsara noho ny teo anelanelan'ny Ann Coulter sy Hillary Clinton tamin'ny faran'ny herinandro.) Ary mazava ho azy, ilay voalohany mahasosopaty ianao mipoitra tsindraindray.
Mandefa any amin'ny Raha hitsoka kaonty Twitter somary sarotra kokoa. Fa ny tena sarotra dia ny fananganana fitaovana hisintonana ny Twitters izay soratan'ny olon-kafa ao amin'ny tranokala If Suck. Mba hanaovana izany dia manana asa Cron aho izay manamarina ny Twitter API isaky ny segondra ary ny rakitsoratra dia manamarina ny tsirairay amin'ny Tweets miverina ao amin'ilay tranokala, manoratra izay vaovao rehetra.
Raha maniry zavatra ao amin'ny Twitter ianao izay heverinao fa mahasosotra dia manipy bitsika fotsiny any @ifsuck. Raha te hijery izay mitsoka mandritra ny andro sy mandritra ny fotoana tsy voafetra ianao (Ron Paul no # 1) dia tsidiho ny Raha mitsoka.
Nanazava ny Google Docs
Ireo tranonkala dia afaka mihazakazaka ireo lahasa voalahatra miaraka amin'i Cron
14 Jan 2008 amin'ny 9:35 PM
Ny teboka iray manontolo dia ny fanangonana izay apetraky ny olona ao anaty fikarohana Internet ary miantso azy ireo hoe minono tanteraka sy vao haingana? Raha heverina fa hikaroka sucks "string" ny script-nao dia tsy manao an'izany. Raha fitaka fotsiny ny fampiasan'ny olona azy io (ary tsara, niasa tamiko izy io) hahitana hoe impiry impiry no niditra ny andian-teny sasany dia mandeha izany.
Mieritreritra aho fa somary “miasa mivaingana” aho saingy antenaiko fa raha apetrako amin'ny "lollipop" ny motera dia hitady ny fitambaran'ny "lollipops" sy "sucks".
Ary fantatrao fa, raha manoratra kely ianao matetika, dia manomboka mahatsikaiky…
14 Jan 2008 amin'ny 9:58 PM
Ny tena teboka, Bob, dia ny hanangana zavatra izay nifangaro tamin'ny API API ao aminy. Tsy mbola nanao an'io aho ary mila manao fanatanjahan-tena ny ati-dohako (kely).
Ny mahafinaritra dia ny mijery fotsiny izay heverin'ny olona fa mahasosotra azy - manomboka amin'ny fijerena vao haingana ka hatramin'ny endrika maharitra. Efa nahazo fanarahana kely tao amin'ny Twitter izy io, izay ampiasain'ny olona hilazana momba ny asa, fiainana, teknolojia sns.
Ny fahitana azy no mahavariana ahy. Toy ny safo-dranon'ny lahatsoratra mifandraika amin'ny NFL mandritra ny lalao baolina kitra. Tena namoaka ny fangatahana ny olona!
Mbola ho avy amin'ity karazana fampiharana ity. Tena fanandramana fotsiny io, ny tena fampiharana dia somary an-dalambe!
15 Jan 2008 amin'ny 3:08 PM
Tsy maintsy maty ny Twitter